Izindaba - Ukufakwa kwezimpawu zomshini
Ukufakwa Kwama-Mechanical Seal
Indlela yokufaka yophawu lomshini iyahluka ngohlobo lwesimakhenikhi nohlobo lomshini, kepha okubalulekile kokufaka kucishe kufane. I-Mechanical seal ingesinye sezinto eziyisisekelo ezinemishini ngokunemba nokwakheka okuyinkimbinkimbi. Izinyathelo zokufaka kanye nezinyathelo zokuphepha zingokulandelayo:
1. Ukuhlanganiswa kwezingxenye ezimile zensimbi yomshini:
a. Faka i-anti rotation pin emgodini ohambisanayo wekhava yokuphela kokufaka uphawu;
b. Faka indandatho yesitikha se-static eringini le-static, faka iringi le-static ikhava yokuphela kophawu, futhi unake ukwenza iphini lokuzungeza eliphikisayo lingene emgodini wendandatho emile. Lapho ufaka i-gland, naka ukuthi ungenzi ukuthi i-static ring ithinte i-shaft - amabhawodi kufanele aqiniswe ngokulinganayo kaningana.
2. Ukuhlanganiswa kwezingxenye ezijikelezayo zensimbi yomshini: hlanganisa izingxenye ezijikelezayo zensimbi yomshini kushaft ngamunye ngamunye ngokulandelana. Uma kunomkhono we-shaft, izingxenye ezijikelezayo zensimbi yomshini kufanele zihlanganiswe emkhonweni we-shaft ngokulandelana, bese kuthi i-shaft enezingxenye ezijikelezayo zensimbi yomshini kufanele ifakwe kushaft.
3. Faka ikhava yokuphela emzimbeni wokufaka uphawu bese uyiqinisa ngokulinganayo ngezikulufo.
4.Ukuthi isivivinyo sediski silula, uma idiski ingahambi noma inzima, hlola ukuthi usayizi womhlangano ulungile yini. Indlela yokufaka:
(1) Hlola ukuthi ngabe imodeli, imininingwane nezingxenye zesimpawu sokufakelwa okufanele zifakwe zilungile.
(2) Hlola ukuthi ngabe zonke izingxenye zensimbi yomshini zilimele yini, ikakhulukazi ukuthi ukuphela kokuvala ubuso bendandatho ehambayo nendandatho emile kulimele. Uma kukhona umonakalo otholakele, lungisa noma shintsha izingxenye ezintsha. Zonke izingxenye zokuvala kufanele zihlanzwe ngophethiloli noma kaphalafini ukugcina ubuso bezinto bungekho uthuli nezinto zangaphandle.
(3) Kungakhathaliseki ukuthi kunamabhawodi kanye nemijelo ebusweni bomphini noma umkhono, udonga lwangaphakathi lokufaka uphawu lwengaphakathi nobuso obungaphakathi bokumboza ikhava yokugcina. Uma kutholakala i-burr noma i-groove, kufanele ibushelelezi, ipholishwe, ihlanzwe ngophethiloli noma uphalafini, futhi ihlanzwe nge-gauze ehlanzekile futhi ethambile, ukotini omunca nezinye izinto. Ukuze kwenziwe kube lula ukufaka, uwoyela kufanele usetshenziswe ebusweni be-shaft noma i-shaft sleeve kanye nendawo efanayo yendlala nokuvala indandatho ukugwema ukungqubuzana okwomile ngesikhathi sokuqala.